Broadcast Pix သည် 0% StreamingPix စနစ်များအတွက်ရန်ပုံငွေကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Broadcast Pix သည် 0% StreamingPix စနစ်များအတွက်ရန်ပုံငွေကိုကြေငြာခဲ့သည်
(ဇူလိုင်လ 29, 2020)
Broadcast Pix ™သည်မြောက်မြားစွာသော Star Leasing နှင့်လက်တွဲပူးပေါင်းမှုကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အပြိုင်အဆိုင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှု 0% ငွေကြေးရှိသည့် Summer Promo Package ဖြင့်ပူးပေါင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည် StreamingPix, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming ကိုဖြေရှင်းချက်။
သင်၏တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်၊ အစည်းအဝေး၊ ဟောပြောပို့ချမှုသို့မဟုတ်ဝတ်ပြုရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ်လလျှင် ၂၇၁ ဒေါ်လာဖြင့်သာကြည့်ရှုရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုရယူပါ။
ပေးဆောင်ဖို့ 24 လ
သက်တမ်း၏အဆုံးမှာ $ 1 တင်ရန်
* အားလုံးလျှောက်လွှာများအကြွေးခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုအောက်တိုဘာ 31, 2020 အဆုံးသတ်
Broadcast Pix ၏ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလုံးအတွက်တောင်းဆိုမှုအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
“Our partnership with North Star Leasing provides our dealers and customers with flexible options, enabling them to get the live broadcasting and streaming solutions they need to effectively communicate their message in today’s challenging times,” said Graham Sharp, CEO, Broadcast Pix.
Broadcast Pix ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရွေးချယ်မှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ထုတ်လွှင့် Pix North Star ငှားရမ်းခြင်း StreamingPix 2020-07-29
ယခင်: Sara Glaser, CAS နှင့်အတူအသံ Insight
နောက်တစ်ခု: SmallHD သည်ကိုးကားစရာအဆင့် 4K OLED ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်